Kitapo famehezana miverina na masinina fonosana gusset
Masinina fonosana doypack Premade Zipper
Tombo-kase mandeha ho azy + Masinina mampihena hafanana
Mpameno ny amboara volumetrika
Lafarinina mandeha ho azy, fonosana vita amin'ny kitapo vita amin'ny vatomamy fonosana M ...
Rotary granule premade mijoro paosy paosy fonosana ...
Sachets madinidinika kely mankany am-bava misokatra malalaka ...
Milina fametahana vertika mandeha ho azy, kitapo kely mankany Bi ...
Rotary Chilli Powder Premade Pouch Bag Nomena Packagi ...
Syrup marobe, saosy fonosana sachet famehezana ...
Sachets madinidinika kely ao anaty masinina lehibe misokatra am-bava mitazona fonosana fonosana faharoa
Automatic Bag Manome Sakafo fonosana Machine (Double Silo Type)
Production dingana: sackets → marindrano conveyor → Double hantsana conveyor → haingam-pandeha conveyor → kitapo Ny fisiana ara-milina → mandeha ho azy kitapo sakafo milina → fiara milina fanjairana → voatenona kitapo Output conveyor
Main ara-teknika masontsivana:
1 fonosana isan-karazany: 150g ~ 1000g sachet vokatra
2. fonosana Fitaovana: taratasy kitapo, tenona kitapo (nilahatra amin'ny PP / PE sarimihetsika)
3. fonosana hafainganam-pandehany: 4 ~ 14 tenona kitapo / min, (40 ~ 180 pouches / min)
(haingana kely niova araka ny vokatra isan-karazany)
4. Ranking teny: tokana Silo baiting, nametraka toerana tokana
sackets → → horizontal conveyor Double hantsana conveyor hafainganam-pandeha avo conveyor → → → kitapo Ny fisiana ara-milina mandeha ho azy kitapo sakafo milina fanjairana milina fiara → → voatenona bag output conveyor
Main masontsivana ara-teknika:
(niova kely ny hafainganam-pandeha araka ny vokatra isan-karazany)
1. Hefei IECO Intelligent Equipment CO., LTD (CHANTEC PACK) dia miorina ao an-tanànan'i Hefei, faritanin'i Anhui - iray amin'ireo tanàna siantifika sy fanabeazana malaza any Sina.
4. IECO dia manaraka hatrany ny fenitry ny "mampihena ny vidin'ny fonosana, fa tazomy ny kalitao".
5. Nahazo mari-pahaizana ISO9001 sy CE ny IECO
6. IECO dia afaka manolotra fanompoana isan-trano amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao. Ny torolàlana lavitra dia azo atolotra amin'ny sela sy tambajotra alohan'ny sy aorian'ny fivarotana.
1. 20 taona niainana ho an'ny milina famonosana fiara tanteraka
2. Nanaiky tamin'ny taona CE isika
3. 24 ora sy volana guarantee
4. Afaka manolotra ny teknisianina ho any ampitan-dranomasina mba hanao komisiona
1..Q: Orinasa orinasa na mpivarotra ianao?
A: Orinasa any amin'ny faritanin'i Anhui izahay, tanàna Hefei. Ary manana mpanjifa any Afrika, Eropa, Amerika atsimo, Azia ary Amerika Avaratra isika. Azafady zarao ny fonosanao takiana, avy eo izahay dia hiezaka ny hanome anao modely mety indrindra sy ilay horonan-tsary niasan'ny mpanjifanay taloha.
2..Q: Inona no antoky ny milina?
A: 1 taona hatramin'ny nahatongavan'ilay milina tao amin'ny ozin'ny mpanjifa.
3.Q: Nahoana no mifidy antsika?
A: ekipa R&D matihanina sy za-draharaha, rafitra fanaraha-maso kalitao azo antoka sy hentitra. Izahay dia mizaha ny vokatra rehetra alohan'ny fandefasana mba hahazoana antoka fa ny zavatra rehetra amin'ny toe-javatra tonga lafatra.
4.Q: Azonao atao ve ny mandamina ny teknisianina hametraka ny milina ho anay?
A: Eny, hotendrenay ny injenieranay handeha ho any ivelany hametraka milina ho an'ny mpanjifanay. Ary raha manana ekipa injeniera ianao, dia manome boky torolalana amin'ny teny anglisy, kojakoja ary fitaovana ho an'ny fametrahana.
Previous: Milina fametahana vertika mandeha ho azy, kitapo kely mankany amin'ny milina fanangonana kitapo pe lehibe
Next: Masinina fanaovan-tsarimihetsika automatique automatique an'ny kosmetika ampoule sy teabag
DETERGENT Powder fonosana Machine
Faharoa fonosana Machine
Masinina feno fonosana biriky feno banga foana
Kitapo kitapo kitroka kely mitsangana miendrika milanja ...
Kitapo automatique robotic automatique ary apetraho amin'ny toerany
Phone: Antsoy izahay izao: +86 18656940167
Toeram-pisakafoanana akoho mandeha ho azy ...
Ny mahandro sakafo in-telo isan'andro dia tsy afa-misaraka amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Ao amin'ny sakafo any Azia Atsinanana, ankoatra ny sira sy saosy soja mahazatra, ny essence akoho dia zava-manitra be mpampiasa. Ny tena tanjona amin’ny fihogo...
Masinina famonosana voanjo mandeha ho azy...
Ny voan'ny Areca dia miparitaka indrindra any amin'ny faritra mafana toa an'i Yunnan, Guangxi ary Hainan any Shina, ary ambolena betsaka any amin'ny faritra tropikaly toa an'i India, Myanmar ary Vietnam. Efa nanana fahazaran-dratsy ny olona teny amin’ireny faritra ireny...
Ny fanatsarana ny indostrian'ny sakafo ho an'ny biby fiompy dia ins...
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, noho ny fitomboana haingana ny tsenan'ny indostrian'ny biby fiompy, dia navoaka haingana ny tsenan'ny indostrian'ny sakafo biby. Ao amin'ny fizarana sakafo ho an'ny biby fiompy, ny fihinanana sakafo fototra PET ...
Automatic fonosana Machine , Vovoka fonosana Machine, fonosana Machine , famonosana Machine , Shina fonosana Machine , Sakafo fonosana Machine ,